How is Rakhine population left behind in Myanmar’s fight against COVID-19? – Kyaw Zaw Oo's Blog
April 11, 2020 December 10, 2021 kyaw zaw oo
How is Rakhine population left behind in Myanmar’s fight against COVID-19?
(မြန်မာအစိုးရက ကိုဗစ်-၁၉ ကို တိုက်ဖျက်ရာမှာ ရခိုင် လူဦးရေထုကို ဘယ်လို ချန်လှပ်ထားခဲ့သလဲ)
This note is my refutation against the lies of Myanmar government’s ministry of foreign affairs, issuedafew hours ago, regarding their so-called fight against COVID-19 in Rakhine state.
Myanmar has left Rakhine population behind in its fight against COVID-19.
While Myanmar’s central government is publicizing its propaganda on how much it is fightingagood fight against COVID-19 in Rakhine state, Rakhine local population, in fact, is being opressed with internet shutdown, blockage on humanitarian aids, intentional bombings on Rakhine and Chin civillians, arbiteary arrests, threats of arrests on indepndent journalists and many other unthinkable tools of oppressions.
Civillian part of Myanmar government can be said to be well co-operating with its millitary counterparts in crushing innocent lives in Rakhine state, as indicated by things like internet shutdown, recent internal department orders to put transportation restrictions of seriously injuried people within Sittwe district and turning blind eyes to attrocities commited by the millitary, to nameafew.
While “STAY HOME” is beingalife-saving motto against COVID-19 in the world, more thanahundred of thousands of people in Rakhine state have now no home to stay; many of their homes were burnt down by the millatry.
While “Social Distancing” is beingagood tactic to confront CoVID-19, Rakhine IDPs have no other options but have to be cuddled together in crowded camps of dire situations.
While “Washing Hands” is beingaway of fighting COVID-19, Rakhine IDPs have not enough water and soaps to cover basic sanitation.
When the state counsellor Daw Aung San Su Kyi said,afew day ago, she started using Facebook in order to impart life-saving information about COVID-19 to public, people in northern Rakhine state could not use internet, and were facing other forms of information blockage such as criminalizing the journalists.
As far as I know and as of today, many people of muslim population in Buthidaung-Maungdaw of northern Rakhine state are still going to their mosques to pray together in crowded groups, because they haven’t received any directives (from the government) not to do so, they told me.
ကျွန်တော့်ရဲ့ ဒီစာစုဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နာရီပိုင်းလောက်က ထုတ်ပြန်တဲ့ မြန်မာအစိုးရ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း ကိုဗစ်-၁၉ တိုက်ဖျက်မှု ဆိုင်ရာထုတ်ပြန် လိမ်ညာမှုတွေကို ကျွန်တော့်ဘက်က ချေပချက် ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုဗစ်-၁၉ ကို တိုက်ဖျက်ရာမှာ မြန်မာအစိုးရ ဟာ ရခိုင် လူဦးရေထုကို ချန်လှပ်ထားခဲ့တယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲ ကိုဗစ်-၁၉ ကို တိုက်ဖျက်ရန်လုပ်ဆောင်မှုတွေကို ကောင်းစွာ ကြိုးကုတ်အားထုတ်လျက်ရှိပါတယ် လို့ မြန်မာဗဟိုအစိုးရက ဝါဒဖြန့်နေချိန်မှာ – ရခိုင် လူဦးရေထုဟာ ပုံစံအမျိုးမျိုးသော ဖိနှိပ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ရခိုင် လူဦးရေထုဟာ အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားခြင်းကိုကြုံရတယ်။ လူသားချင်းစာနာတဲ့ အထောက်အပံ့တွေ မလာနိုင်အောင် တားဆီးခြင်းတွေကြုံရတယ်။ ရခိုင် နဲ့ ချင်း အရပ်သားတွေအပေါ်မှာ တမင်တကာ ဗုံးကြဲခြင်းတွေ ကြုံရတယ်။ လက်လွတ်စပယ် စိတ်ထင်တိုင်းဖမ်းဆီးခြင်းတွေ ရှိနေတယ်။ လွတ်လပ်သော သတင်းသမားတွေကို ဖမ်းဆီးရန် ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကြုံနေရတယ်။ အခြားအခြားသော စဉ်းစားရန်ပင် မဝံ့တဲ့ ဖိနှိပ်မှု ကိရိယာ အမျိုးမျိုးကို ကြုံရတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲက အပြစ်မဲ့ အသက်တွေက်ို နင်းချေတဲ့နေရာမှာ အစိုးရရဲ့ အရပ်သားဖက်ခြမ်းဟာ စစ်ဖက်ဆိုင်ရာခြမ်းနဲ့ ကောင်းစွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ် လို့ ဆိုမယ်ဆိုရင် ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါကို ဘယ်လို ဖြစ်ရပ်တွေက ညွှန်ပြနေသလဲဆိုတော့ – အင်တာနက်ပိတ်ပင်တာ၊ အရေးပေါ်ဒဏ်ရာရ လူနာတွေကို သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကို ဌာနတွင်း အမိန့်တွေအားဖြင့် စစ်တွေခရိုင်အတွင်းမှာ မကြာသေးခင်ကစပြီး ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်တာ၊ စစ်ဘက်က ကျူးလွန်တဲ့ ရက်စက်မှုတွေက်ို မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်ပေးတာ . . . ၊ စသည်အားဖြင့် ဖြစ်ပါတယ်။
“အိမ်မှာ နေပါ” ဆိုတဲ့စကားဟာ ကိုဗစ်-၁၉ ရန်ကနေ အသက်ကယ်ပေးနိုင်တဲ့ ဆောင်ပုဒ် တစ်ခုဖြစ်တယ် လို့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သိန်းချီသော ရခိုင်ပြည်သူတွေဟာ အခုအခါမှာ နေစရာ အိမ်မရှိကြပါဘူး။ သူတို့ထဲက တော်တော်များများရဲ့ အိမ်တွေကို စစ်တပ်က မီးရှို့ပစ်ခဲ့တာ လို့ ဆိုကြပါတယ်။
“ဝေးဝေးနေပါ” ဆိုတဲ့နည်းလမ်းဟာ ကိုဗစ်-၁၉ ကို တိုက်ဖျက်ရာမှာ နည်းဗျူဟာကောင်း တစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရခိုင် စစ်ဘေးရှောင်တွေအဖို့ရာ အခြေအနေဆိုးလှတဲ့ လူထူထပ်တဲ့ ဒုက္ခသည် စခန်းတွေမှာ ထွေးလုံးပတ်လုံးနေကြဖို့ရာကလွဲလို့ အခြားရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် မရှိကြပါဘူး။
“လက်တွေကို ဆေးဖို့” ရာ ဟာ ကိုဗစ်-၁၉ တိုက်ဖျက်ရာနည်းလမ်း တစ်သွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရခိုင် စစ်ဘေးရှောင်တွေမှာတော့ အခြေခံ သန့်ရှင်းရေးတွေကို လုပ်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ ရေ နဲ့ ဆပ်ပြာမရှိကြပါဘူး။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်အနည်းငယ်က နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါတယ်။ ကိုဗစ်-၁၉ နဲ့ ပတ်သက်လို့ အသက်ကယ်အချက်အလက်တွေအား ပြည်သူတွေထံမျှဝေနိုင်ဖို့ရာ Facebook ကို စတင် သုံးစွဲခြင်း ဖြစ်တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ သူမက အဲသလို ပြောတဲ့အချိန်မှာ ရခိုင်မြောက်ပိုင်းက ပြည်သူတွေဟာ အင်တာနက် သုံးခွင့်မရပါဘူး။ ဒါ့အပြင် သတင်းသမားတွေကို ရာဇဝတ်အပြစ်သား ဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်း အစရှိတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ သတင်းအချက်အလက် ပိတ်ပင်ခြင်းများကိုလည်း ခံစားကြရပါတယ်။
ဒီနေအထိ ကျွန်တော် သိသမျှကို ပြောရရင် – ရခိုင်မြောက်ပိုင်း ဘူးသီးတောင် မောင်တောက များစွာသော မူဆလင်တို့ဟာ ဗလီတွေကိုသွားပြီး လူအုပ်စုများအလိုက် ဝတ်ပြုဆုတောင်းတာ ပြုနေကြဆဲ ဖြစ်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီနေ့ဖက်ထိ ဒီလို အုပ်စုလိုက် ဝတ်မပြုကြဖို့ အစိုးရဘက်က ညွှန်ကြားချက် ဘာမှ ထုတ်ပြန်ညွှန်ကြားခြင်း မရှိသေးလို့ ဆိုပါတယ်။
၂၀၂၀ ဧပြီလ (၁၀) ရက်
ကြှနျတေျာ့ရဲ့ ဒီစာစုဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ နာရီပိုငျးလောကျက ထုတျပွနျတဲ့ မွနျမာအစိုးရ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာနရဲ့ ရခိုငျပွညျနယျတှငျး ကိုဗဈ-၁၉ တိုကျဖကျြမှု ဆိုငျရာထုတျပွနျ လိမျညာမှုတှကေို ကြှနျတေျာ့ဘကျက ခပြေခကျြ ဖွဈပါတယျ။
ကိုဗဈ-၁၉ ကို တိုကျဖကျြရာမှာ မွနျမာအစိုးရ ဟာ ရခိုငျ လူဦးရထေုကို ခနျြလှပျထားခဲ့တယျ။
ရခိုငျပွညျနယျထဲ ကိုဗဈ-၁၉ ကို တိုကျဖကျြရနျလုပျဆောငျမှုတှကေို ကောငျးစှာ ကွိုးကုတျအားထုတျလကျြရှိပါတယျ လို့ မွနျမာဗဟိုအစိုးရက ဝါဒဖွနျ့နခြေိနျမှာ – ရခိုငျ လူဦးရထေုဟာ ပုံစံအမြိုးမြိုးသော ဖိနှိပျမှုတှကေို ရငျဆိုငျနရေပါတယျ။ ရခိုငျ လူဦးရထေုဟာ အငျတာနကျဖွတျတောကျထားခွငျးကိုကွုံရတယျ။ လူသားခငျြးစာနာတဲ့ အထောကျအပံ့တှေ မလာနိုငျအောငျ တားဆီးခွငျးတှကွေုံရတယျ။ ရခိုငျ နဲ့ ခငျြး အရပျသားတှအေပျေါမှာ တမငျတကာ ဗုံးကွဲခွငျးတှေ ကွုံရတယျ။ လကျလှတျစပယျ စိတျထငျတိုငျးဖမျးဆီးခွငျးတှေ ရှိနတေယျ။ လှတျလပျသော သတငျးသမားတှကေို ဖမျးဆီးရနျ ခွိမျးခွောကျမှုတှကွေုံနရေတယျ။ အခွားအခွားသော စဉျးစားရနျပငျ မဝံ့တဲ့ ဖိနှိပျမှု ကိရိယာ အမြိုးမြိုးကို ကွုံရတယျ။
ရခိုငျပွညျနယျထဲက အပွဈမဲ့ အသကျတှကျေို နငျးခတြေဲ့နရောမှာ အစိုးရရဲ့ အရပျသားဖကျခွမျးဟာ စဈဖကျဆိုငျရာခွမျးနဲ့ ကောငျးစှာ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျလကျြရှိတယျ လို့ ဆိုမယျဆိုရငျ ဆိုနိုငျပါတယျ။ ဒါကို ဘယျလို ဖွဈရပျတှကေ ညှနျပွနသေလဲဆိုတော့ – အငျတာနကျပိတျပငျတာ၊ အရေးပျေါဒဏျရာရ လူနာတှကေို သယျယူပို့ဆောငျရေးကို ဌာနတှငျး အမိနျ့တှအေားဖွငျ့ စဈတှခေရိုငျအတှငျးမှာ မကွာသေးခငျကစပွီး ကနျ့သတျခြုပျခယျြတာ၊ စဈဘကျက ကြူးလှနျတဲ့ ရကျစကျမှုတှကျေို မမွငျခငျြယောငျဆောငျပေးတာ . . . ၊ စသညျအားဖွငျ့ ဖွဈပါတယျ။
“အိမျမှာ နပေါ” ဆိုတဲ့စကားဟာ ကိုဗဈ-၁၉ ရနျကနေ အသကျကယျပေးနိုငျတဲ့ ဆောငျပုဒျ တဈခုဖွဈတယျ လို့ ကမ်ဘာပျေါမှာ ဆိုနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ သိနျးခြီသော ရခိုငျပွညျသူတှဟော အခုအခါမှာ နစေရာ အိမျမရှိကွပါဘူး။ သူတို့ထဲက တျောတျောမြားမြားရဲ့ အိမျတှကေို စဈတပျက မီးရှို့ပဈခဲ့တာ လို့ ဆိုကွပါတယျ။
“ဝေးဝေးနပေါ” ဆိုတဲ့နညျးလမျးဟာ ကိုဗဈ-၁၉ ကို တိုကျဖကျြရာမှာ နညျးဗြူဟာကောငျး တဈရပျဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ရခိုငျ စဈဘေးရှောငျတှအေဖို့ရာ အခွအေနဆေိုးလှတဲ့ လူထူထပျတဲ့ ဒုက်ခသညျ စခနျးတှမှော ထှေးလုံးပတျလုံးနကွေဖို့ရာကလှဲလို့ အခွားရှေးခယျြပိုငျခှငျ့ မရှိကွပါဘူး။
“လကျတှကေို ဆေးဖို့” ရာ ဟာ ကိုဗဈ-၁၉ တိုကျဖကျြရာနညျးလမျး တဈသှယျဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ရခိုငျ စဈဘေးရှောငျတှမှောတော့ အခွခေံ သနျ့ရှငျးရေးတှကေို လုပျဖို့ လုံလောကျတဲ့ ရေ နဲ့ ဆပျပွာမရှိကွပါဘူး။
ပွီးခဲ့တဲ့ ရကျအနညျးငယျက နိုငျငံတျော အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျက ပွောပါတယျ။ ကိုဗဈ-၁၉ နဲ့ ပတျသကျလို့ အသကျကယျအခကျြအလကျတှအေား ပွညျသူတှထေံမြှဝနေိုငျဖို့ရာ Facebook ကို စတငျ သုံးစှဲခွငျး ဖွဈတယျ လို့ ဆိုပါတယျ။ သူမက အဲသလို ပွောတဲ့အခြိနျမှာ ရခိုငျမွောကျပိုငျးက ပွညျသူတှဟော အငျတာနကျ သုံးခှငျ့မရပါဘူး။ ဒါ့အပွငျ သတငျးသမားတှကေို ရာဇဝတျအပွဈသား ဖွဈအောငျလုပျခွငျး အစရှိတဲ့နညျးလမျးတှနေဲ့ သတငျးအခကျြအလကျ ပိတျပငျခွငျးမြားကိုလညျး ခံစားကွရပါတယျ။
ဒီနအေထိ ကြှနျတျော သိသမြှကို ပွောရရငျ – ရခိုငျမွောကျပိုငျး ဘူးသီးတောငျ မောငျတောက မြားစှာသော မူဆလငျတို့ဟာ ဗလီတှကေိုသှားပွီး လူအုပျစုမြားအလိုကျ ဝတျပွုဆုတောငျးတာ ပွုနကွေဆဲ ဖွဈတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ဒီနဖေ့ကျထိ ဒီလို အုပျစုလိုကျ ဝတျမပွုကွဖို့ အစိုးရဘကျက ညှနျကွားခကျြ ဘာမှ ထုတျပွနျညှနျကွားခွငျး မရှိသေးလို့ ဆိုပါတယျ။
၂၀၂၀ ဧပွီလ (၁၀) ရကျ
Previous Tinma village scorched / မီးရှို့ခံရသော တငျးမကြေးရှာ
Next Myanmar Army reportedly kills five innocent civilians at Minbya | မငျးပွားမွို့ပျေါတဈဝိုကျ စဈတပျက အရပျသားငါးဦးကို သတျဖွတျ ဟု ဆို